IIKHABHATHI ZELIZWE LASEKHITSHINI (IINGCAMANGO KUNYE NESIKHOKELO SESIMBO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zelizwe laseKhitshini (Iingcamango kunye nesiKhokelo seSimbo)
Iikhabhathi zelizwe laseKhitshini (Iingcamango kunye nesiKhokelo seSimbo)
Igalari yethu yeekhabhathi zelizwe lekhitshi inezinto ezahlukeneyo zesitayile somnyango wekhabhathi ukukunceda ukhethe eyona ifanelekileyo kuyilo lwakho lwangaphakathi. Iikhikhini zesitayile selizwe zaziwa kakhulu ngentuthuzelo kunye nobushushu abazisa emakhaya. Amakhitshi aphefumlelweyo asemaphandleni awonwabanga kakhulu njengasekhaya, ukutya okuninzi kosapho kunye nemibhiyozo emyoli. Kukukhumbuza ikhitshi likagogo wakho, apho izithethe zokupheka zigcinwa zintle okanye ikhaya lasezilalini elithuthuzelayo, apho ungonwabela ukukhanya kwelanga okuchwayitisayo okudlula ngeefestile zeglasi ezicacileyo njengoko unuka ivumba elimnandi lembiza entsha yekofu. Iikhikhini zesitayile selizwe zijolise kubushushu obumemeleyo obenza iindwendwe kunye nosapho bahlale beziva bamkelekile ukuba badle basele, ngelixa bebeka imeko ekhululekile. Isishwankathelo, iikhikhini zesitayile selizwe zikukhumbuza ukuba kunjani ukuba 'sekhaya.
Ikhitshi lesitayile selizwe kukwafuneka ukuba lihlale kulo, kunokuba liboniswe njengekhitshi lokubonisa. Inesibheno esahlukileyo emhlabeni kunye nokujongwa kwendlu, okuziswa ziimpawu zoyilo ezisebenzayo kunye nezinto eziyilayo ezithuthuzelayo.
Iikhikhini zelizwe ziwela phantsi kwesimbo sendabuko kwaye zibonakaliswa ngokuba li-rustic, ilizwe lakudala kodwa alilixesha. Ukukhuthazwa kwayo kunokuvela kwiindawo ezisemaphandleni zasemaphandleni aseFrance, ukuya ekhitshini lendlu yasefama, okanye kwikhaya lelizwe lesiNgesi. Ezinye iikhitshi zelizwe ezithandwayo lilizwe laseTuscan, indlu yamakhaya kunye negadi yelizwe. Inye yezihloko zichazwe ngeenkcukacha ezithile kunye nokugqitywa kokuchukumisa ezenza ukuba zahluke ngokupheleleyo, kodwa isiseko sihlala sililizwe eliqinileyo njengophawu.
Uyilo lweeKhabhinethi zelizwe laseKhaya
Isitayile selizwe Iminyango yeKhabinethi yeKhabhinethi
Iikhabhathi zelizwe laseFrance laseKhitshi
Ilizwe laseFama laseKhitshini iikhabhathi
Ilizwe leKhitshi elineeKhabhathi eziMhlophe
Ikhabhathi yeplanga ithathwa njengeyona nto iphambili kwiikhitshi zesitayile selizwe. Ukuba yenye yezona zinto ziphambili ekhitshini lelizwe eliqhelekileyo, ukubandakanya uyilo lwekhabhathi yekhitshi elungileyo kufuna ingqalelo efanelekileyo kwiinkcukacha, ukugqiba kunye nombala. Apha ngezantsi sijonga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lweekhabhathi zelizwe zokukunceda uthathe isigqibo sokuba ubushushu kunye nentuthuzelo yabo ilungile na ekhayeni lakho. (Uluhlu olupheleleyo lwezona zidumileyo Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini Ndwendwela iphepha lethu legalari)
Iinwele zomtshato zeenwele ezincinci
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iikhabhathi zekhitshi zelizwe ziwela phantsi kwesitayile sendabuko kwikhabhathi yekhitshi kwaye ibonakaliswa kukungabonakali kwexesha, intuthuzelo yendalo kwaye ihlala ivakalelwa. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lunika imeko efudumeleyo kunye neyobizo. Ngokungafaniyo namakhitshi anamhlanje aphawulwe ngemigangatho egudileyo kunye noyilo olugudileyo, iikhabhathi zekhitshi zelizwe zihombisile kwaye zirustic.
Iimpawu zoyilo lwekhabhinethi yelizwe
Nazi ezinye izinto ezinje ngeekhabhathi zelizwe.
Iikhabhathi zekhitshi zelizwe ziziva zinekhaya -Ukuba projekthi ihlala kwindawo ekhangeleka kwaye ithuthuzelayo njengokuziva kweekhitshi zelizwe, iikhabhathi zesitayile selizwe zibandakanya iinkcukacha ezenziwe ngesandla ezirhabaxa kwaye zilula.
Iikhabhathi zelizwe zasekhitshini zezendalo kwaye zendalo- Uhlobo lwelikhitshi lwelizwe lujolise ekungeniseni ngaphandle ngokusebenzisa izinto zendalo zekhabhinethi ezinje ngomthi onzima oqinileyo okanye iinkuni eziphindiweyo / ezibuyisiweyo.
Iikhabhathi zelizwe zasekhitshini zinenkangeleko ecocekileyo- Nangona ihonjisiwe, isitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini zilawulwa ziimo ezilula. Ngokuqhelekileyo ukungaqondi kakuhle njengokujonga okuluhlaza okanye ukungafakwanga, iikhabhathi zekhitshi zelizwe zinomtsalane ococekileyo ngenxa yokusetyenziswa okubalulekileyo kwemibala emhlophe kumbala wayo wombala.
Iikhabhathi zelizwe zasekhitshini zisebenzisa iinkcukacha ezilula- Iikhabhathi zekhitshi zelizwe zihombise ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye iindlela zesiko zasekhitshini xa kufikwa kwizinto zoyilo ezikhoyo kwisithuba. Kodwa ngokubhekisele kwikhabhathi, iinkcukacha zihlala zilula kwaye zibekwa kwicala eliphambili lomnyango wekhabhathi okanye ubuso bedraw. Kwilizwe laseFrance okanye ilizwe lesiNgesi eliphefumlelweyo izitayile zekhabinethi yasekhitshini, iinkcukacha kunye nezinto zokuhombisa zithathwa njengezona zinto ziphambili- cinga ngee-chunky pilasters, imizobo emihle kunye neenkcukacha zokuhombisa.
Iikhabhathi zelizwe zasekhitshini zinombala ongathathi hlangothi ngombala ocebileyo, oqaqambileyo - Imibala engathath'icala emhlophe, emhlophe, e-beige kunye neye-brown isetyenziswa kakhulu kwiikhabhathi zasekhitshini zelizwe. Imibala esikhumbuza indalo ikwayimibala eyaziwayo yelizwe ekhitshini yelizwe. Ngokuqhelekileyo ziyindibaniselwano yee-hues ezipholileyo eziqaqambileyo kunye neetoni zomthi ezifudumeleyo.
Iikhabhathi zelizwe zasekhitshini azipheli- Iikhikhini zelizwe, ngokubanzi, zinomlinganiswa ohlala ixesha elide obonakalisiweyo ukuba umi kuvavanyo lwexesha. Nokuba ithini na imeko yangoku yendawo yoyilo ekhitshini, iikhabhathi zelizwe elinamandla okuhlala amangalisayo anikezela ngenkangeleko yakudala yamakhaya.
Izinto ezisetyenziselwa uyilo lwekhabhathi zelizwe ikhitshi
Ukusetyenziswa komphezulu wendalo kunye nezixhobo lolunye uphawu oluphambili lwesitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini.
Izinto zokwenza iikhabhathi zekhitshi zelizwe zihlala zomelele, zomelele kwaye zihlala ixesha elide. Ngokwesiqhelo isebenzisa ukhuni oluqinileyo njengezinto zokuqala. Imithi yepayini, i-cherry, i-oki, i-maple kunye ne-hickory zezinye zeentlobo zeenkuni ezithandwayo kwiikhabhathi zekhitshi zelizwe.
Iinkuni zemithi, ezifana nepineyini, nazo ziyintandokazi yeklasikhi yelizwe. Umzekelo wabo wendalo wokucheba kunye neenkcukacha ezityebileyo zinika i-vibe yasekhaya. Imephu ikwalolunye ukhetho olukhulu lwekhabhathi yelizwe ngenxa yombala wokukhanya kunye nembonakalo eqaqambileyo. Imephu ngumthi ocacileyo ocoliweyo ngombala ococekileyo. I-Cherry yenye yezinto ezizinzileyo ezinokusetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zelizwe. Umbala wayo onzulu, omnyama usebenzela ilizwe laseFrance nelizwe lesiNgesi eliphefumlelweyo iikhabhathi zasekhitshini.
Umthi oxinzelelweyo okanye umthi ohlaziyiweyo ungasetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zelizwe. Nokuba ziingcango zekhabhinethi okanye iiyunithi ezivulekileyo zishelufa, iinkuni ezixinzezelekileyo zibonelela ngesibheno esingaphezulu. Ingasetyenziselwa njengesigqubuthelo seplanga sokuhombisa ukufihla uluhlu lweebhodi kunye nemibhobho yokukhupha.
Unokufunda ngakumbi malunga neentlobo zeenkuni ezisetyenziselwa uyilo lwekhabhathi zasekhitshiniApha.
Ukugqitywa koyilo lwekhabhathi zelizwe
Ukutyikitya ukujonga iikhabhathi zekhitshi zelizwe kubandakanya ukhuni lwendalo kwibala okanye ukugqitywa kwepeyinti. Nangona kunjalo, zininzi ezinye izinto ezigqityiweyo onokukhetha kuzo ezinje ngoxinzelelo okanye i-glazing, ukubala ezimbalwa.
Umbala wendalo wokhuni uvumelekile ukuba uthathe inqanaba eliphakathi kwisitayile sekhabhathi yelizwe. Imithi emnyama ihlala isetyenziswa ukuba ufuna ukwenza i-vibe esesikweni ngakumbi, ngelixa iinyanda ezikhanyayo zihlala zisetyenziselwa ukwenza umphumo oqhelekileyo. Bashiyeke kumbala wabo wendalo okanye baphuculwe ngamabala ukubonisa ipateni yabo yegrafu ngakumbi.
Olunye ugqibo oludumileyo lwekhabhathi zekhitshi zelizwe ziipeyinti ezimibala eyahlukeneyo emhlophe. I-White, i-white, i-creamy beige peyinti yelizwe ekhitshini iikhabhathi zasekhitshini zinokushiywa ekugqityweni okucacileyo okanye okubandezelekileyo. Ukubandezeleka kunye nemozulu kusetyenziselwa iikhabhathi zelizwe ekhitshini ukuba uyilo lwakudala lokujonga luyimfuneko. Ukubandezeleka kubandakanya ukusetyenziswa kwe-antique glaze ngaphezulu kwekhabhathi enesanti ukwenza ukubonakala kwexesha.
Kwilizwe laseFrance eliphefumlelweyo iikhabhathi zasekhitshini ezifuna inkangeleko etyebileyo nangaphezulu. Iikhabhathi zekhitshi ezinepeyinti zinokuphuculwa ngokusetyenziswa kwe-glazing. Injengokubengezela kubandakanya ukusebenzisa i-glaze- ulwelo olubonakalayo okanye oluselubala olusebenza njengengubo ephezulu kwikhabhathi yokhitshi enamabala okanye epeyintiweyo, ukuyinika imbonakalo yendabuko, yokuthintela i-patina. Injengokubengezela kunokutshintsha kwangoko iikhabhathi zesitayile selizwe ukuba zibe lixesha elidala. Isebenza kakuhle ngakumbi kwikhabhathi yelizwe ekhitshini enezinto ezininzi zokuhombisa kuba iphakamisa iinkcukacha ngokuyinika isithunzi esifana nomphumo.
Kwezinye iimeko, ukugqitywa kokugqitywa kunye nokugqitywa kwepeyinti kudibaniswe ukudala uyilo lwekhabhinethi yelizwe ekhangayo ngakumbi. Olunye unyango lokugqiba olwahlukileyo olusebenzela ilizwe kunye neefama zasekhitshini zesitayile yikhabhathi engafaniyo. Kuba indlu yelizwe lokwenyani isebenzisa oko kufumanekayo, ayijongi kwizinto eziququzelelwa ngombala Iikhabhathi ezingaphezulu, umzekelo, zinokugqitywa ngombala owahlukileyo wekhabhathi ezisisiseko, okanye kungenjalo, kusetyenziswa isiqithi setekhishini esahlukileyo.
Izitayile zekhompyuter zedizayini yelizwe ekhitshini yoyilo (iintlobo kunye nokugqitywa)
Izixhobo zekhabhinethi ezinjengezibambo kunye namaqhina zizinto ezibaluleke kakhulu kwiikhabhathi zasekhitshini zelizwe. Ezi nkcukacha zincinci zenza impembelelo enkulu ekudaleni eso sandla, isibheno se-rustic kunye nexesha elifanelekileyo kwiikhabhathi zekhitshi zelizwe.
Izimvo zomtshato weKrisimesi kuhlahlo-lwabiwo mali
Ngokubanzi, izixhobo zekhabhinethi zemveli eziphefumlelweyo zinokusetyenziselwa isitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini. Gqiba iikhabhathi zasekhitshini zelizwe ezinamaqhina e-antique kunye neziphatho.
Ngokwezixhobo zekhabhathi ezigqityiweyo, yiya kubhedu lwe-antique, i-pewter kunye ne-nickel ye-nickel ephethe izibambo njengoko zinemvakalelo yokuvuna. I-bronze yebrashi ye-oyile lolunye ukhetho olufanelekileyo njengoko inembonakalo endala kunye nombala omnyama wetshokholethi osebenza kakuhle kuzo zombini iikhabhathi zelizwe ezikhanyayo kunye nemibala ekhanyayo. Ngelixa, ukuba ufuna ithoni ebomvu ukugcwalisa iikhabhathi zekhitshi emhlophe okanye emhlophe yelizwe, zama ukugqiba ubhedu obudala kwaye uyidibanise neepompo kunye nezinto ezilungiselelwe. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ufuna ukuthatha i-weather look kunye ne-antique vibe ukuya kwinqanaba elikhulu, khetha i-antique yensimbi njengoko ineempazamo kunye neziphene ezibonisa ukuziva kwexesha, ngelixa umbala walo ungatshintsha ngokukhawuleza ukusuka ekukhanyeni ukuya kumnyama kuxhomekeke kuyo ukubonakaliswa kukukhanya.
Ukuba ufuna i-Hardware elula kodwa esebenzayo edibanisa ngaphandle komthungo kunye neekhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi, zama ngeenqwanqwa zomthi zomthi ekugqityweni kwendalo kwaye ubavumele ukuba bathelekise ngomthi omnyama okanye ngepeyinti iikhabhathi zelizwe. Isinyithi esenziwe ngombala omnyama kunye nekhabhathi yentsimbi yekharityhulamu yenye yezinto onokukhetha kuzo ukuba ufuna ukuvelisa umahluko ocekeceke wekhabhathi yelizwe elimhlophe.
Xa kufikwa kuyilo lwekhabhathi yekhabhathi yekhitshi, iikhabhathi zelizwe zekhitshi zitsala kwaye ziphatha zihlala zineendlela zokukhuthaza zesitayile ezihonjiswe ngemikrolo okanye imixube entsonkothileyo efana neentyatyambo, amagqabi kunye neescallops. Ngokungafaniyo nezinto zekhabinethi zekhitshi zanamhlanje ezineefom ezi-angular, iiprofayili zelikhwekhishini lekhabhathi yekhitshi yehardware zintle kakhulu. Olunye ukhetho lwesitayile sekhabhathi yekhitshi yentsimbi ngamaqhina, umgqomo kunye nekomityi yokutsala kunye nokuphatha iipleyiti zokuhombisa.
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, iikhitshi zesitayile selizwe azijongi kulungelelwaniso oluphezulu okanye ukuhombisa okuhambelana. Ukongeza umdla ongaphezulu, iidrowa zitsala kwaye zisingatha iikhabhathi zasekhitshini zelizwe nazo zinokungalingani
Iinkcukacha zokuhombisa kuyilo lwekhabhathi zelizwe
Iikhabhathi zekhitshi zesitayile selizwe azibonakaliswanga kuphela kukufudumala kunye nentuthuzelo, ikhabethe yomthi, ukukhanya kunye nemibala eqaqambileyo, kodwa nangokusebenzisa iinkcukacha ezilula zokuhombisa ezinje ngezinto ezenziwe ngomthi okanye kwimizobo.
Uyilo lweekhabhathi zelizwe zasekhitshini zibonisa izinto zokubumba eziqhele ukubekwa ecaleni kwemida yecango lekhabhathi eliphambili, phakathi kweekhabhathi ezingaphezulu kunye nophahla okanye kwiziphelo zekhabinethi. Iipaneli zebhedi yebhodi kunye neepaneli eziphakanyisiweyo nazo ziqhelekile kolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi. Ngokusisiseko, naziphi na iinkcukacha zoyilo ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zemveli, zinokusetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zelizwe.
Kuxhomekeka kuyilo olukhuthazayo olulandelayo, iinkcukacha zokuhombisa zeekhitshi zesitayile selizwe kunokuba lula okanye zintsonkothe. Iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance, umzekelo, zinokubandakanya izixhobo zeentyatyambo okanye iinkcukacha ezinesizathu sokwalusa. Ngelixa indlu yasefama yasekhitshini yasekhitshini inezinto ezilula nezithandekayo ezinje ngombala wokuhombisa ocacileyo.
Nawuphi na umnyango wendlu wekhitshi owenzela ikhitshi yelizwe. Izitayile zeminyango yamakhabethe ekhitshi yemveli zinokudityaniswa kwaye zifaniswe ukunika ikhitshi ilizwe elikhethekileyo liziva. Ezi zitayile zeminyango yekhabinethi yemveli zibandakanya iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo, iingcango zephaneli ezivalekileyo, iingcango zesitayile esijijayo, iingcango zepaneli yebhodi yebhodi kunye neengcango zesandi. Uyilo olukhethileyo luya kuxhomekeka kakhulu ekuphefumleleni onakho kwikhitshi lakho lesitayile selizwe, nokuba ingaba yindlu yasefama, indlu encinci, ilizwe lesiNgesi okanye ilizwe laseFrance.
itheyibhile yomtshato izimvo zokuhombisa
Umzekelo, ilizwe laseFrance isitayile sekhitshi iingcango zekhabinethi zinobunkunkqele kwaye zintsonkothile imbonakalo. Ngokwesiqhelo, uyilo lwabo luzizityebi ngakumbi kwaye luzaliswe ziinkcukacha ezinje ngemikrolo, izinto zokuhombisa kunye nezinto zokuhombisa. Iingcango zeepaneli eziphakanyisiweyo okanye iingcango zekhabinethi ezinephaneli esembindini esezantsi engaphezulu kancinci kunamanye amacandelo ekhabhathi, ziimpawu eziqhelekileyo zeekhabhathi zelizwe.
Ngenye indlela, iingcango zephaneli ezihlaziyiweyo, okanye ezo zinephaneli esembindini esezantsi engaphantsi kwawo onke amacandelo obuso bomnyango wekhabhinethi, zinokusetyenziswa. Iingcango zesitayela seCathhedral zihlala zisetyenziselwa iikhabhathi ezingaphezulu, ngelixa iikhabhathi ezisisiseko zinxibe uyilo oluncinci. Ukubumba kunye neekona kungabekwa ngaphezulu kwekhabinethi yekhitshi ukubanika iinkcukacha ezongeziweyo kunye nokuhombisa.
Iifama zelizwe zasekhaya zasefama zasekhitshini, kwelinye icala, zinembonakalo yeethoni ethe kratya, ngenxa yoko uyilo lomnyango wekhabhathi alusemthethweni kwaye lulula. Iingcango zekhabinethi yesitayile sikaShaker lolunye lweempawu zempawu zempawu zasekhitshini. Uhlobo lwe Shaker lwekhabhathi zasekhitshini lucango lwesiqwenga ezintlanu esinepaneli yeziko elihlaziyiweyo. Nangona inokufumaneka kuseto lwanamhlanje nolwanamhlanje, iingcango zekhabinethi yesitayile seShaker ziyintandokazi ekhitshini lendlu yasefama ngenxa yokubuyela umva kunye nokuthandeka okulula. Kwaye, banegalelo kumnwe we-vibe yangoku kwindawo yemveli.
Kwikhitshi lelizwe lekhitshi, iingcango zepaneli yebhodi enokusetyenziswa njengeyona nto iphambili kwisithuba. Iipaneli zebhedi yebhodi yoluhlu lwamaplanga emithi emxinwa ethe nkqo nkqo yaza yahlulwa ziinduli ezincinane ezibizwa ngokuba ngamaso. Olu hlobo loyilo lomnyango wekhabhathi ekhitshini lunika isibheno se-rustic kunye ne-home vibe kwindawo.
Iingcango zekhabhinethi ezigxininisayo zikwasetyenziselwa ukwaphula ubunzima besitayile selizwe. Iingcango zeKhabinethi ezifakwe ngeglasi ecacileyo zihlala zisetyenziselwa ukubonisa izinto ezixabisekileyo zedinala ngelixa zinika ikhitshi imvakalelo yomoya. Ukufakwa kweglasi ekhokelwe kunye neglasi enamabala nayo ingasetyenziselwa ubugcisa be-amore. Ngamanye amaxesha, iingcango zekhabhinethi nazo ziyaphathwa ngeengcingo zenkukhu ukubanika ilizwe elininzi ngakumbi kunye nefama njenge-vibe.
Iikhabhinethi ezivulekileyo kunye neeyunithi zokugcina izinto ezinokusetyenziselwa ukuziva kamnandi kwigumbi, ngelixa ivumela abaninimzi ukuba babonise izinto zakudala kunye nezinto zerustic kunye nempahla. Ukuhonjiswa kwempahla yokuhombisa, isidlo sangokuhlwa kunye nezitya zemihla ngemihla ziyaboniswa kwezi ndawo zivulekileyo zishelufa.
Imibala yoyilo lwekhabhathi yelizwe ekhitshini
Iphalethi yombala oqhelekileyo kwiikhitshi zesitayile selizwe ngokubanzi zityebile kwaye ziyaqaqamba. Yenziwe ikakhulu ziithoni zomhlaba kunye nemibala enokubonwa kwindalo. Imibala yekhabhinethi yasekhitshini yelizwe ingahluka ekukhanyeni kwendalo kunye nemibala emnyama yeenkuni kunye nebrawuni, ukuya kubundilele obungathathi cala njengamhlophe, icinyiwe kwaye imhlophe. Kulabo bafuna umbala omncinci kwiikhabhathi zabo, imibala ethambileyo kunye mellow enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, mint green, buttery etyheli kunye nezinye i-pastel zisenokuphononongwa ngepeyinti. Amathoni aqaqambileyo kodwa antsonkothileyo anjenge rose, purple, kunye nee hues eziluhlaza nazo zihlala zisetyenziswa. Ngokusisiseko, izisa nawuphi na umbala owufumanayo kwindalo.
Umbala othathwa lilizwe lonke iikhabhathi zasekhitshini ziya kuxhomekeka kakhulu ekuphefumlweni kwabo, njengoko nganye ilandela umbala wephalethi owahlukileyo. Iifama zelizwe zasekhitshini zasekhitshini zithanda ukugqitywa kweenkuni zendalo okanye zipendwe ngombala omhlophe, ezimhlophe okanye beige.
Ilizwe lesiNgesi ikhitshi lithanda uyilo oluhombise ngakumbi, yiyo loo nto imibala ityebile kwaye yomelele. Isitayile selizwe elineenkuni ekhitshini nekhabhathi ephefumlelweyo yesiNgesi ijolise kwimithi enemibala enzulu enje ngecherry, kwaye ihlala izaliswa yimibala emihle ephefumlelweyo enje ngemibala ebomvu, iipepuli kunye nemifuno.Jonga igalari yethu ye iikhabhathi zekhitshi zecherry Apha.
Kwelinye icala, iikhitshi zelokishi zelizwe zinemibala ethe kratya kwaye eqaqambileyo. Iikhabhathi zasekhitshini zihlala zimhlophe okanye zi-beige ngombala. Ukufumana i-cheery kunye ne-vibe ethandekayo, i-pastels ezithambileyo ezinjengeblue blues, imifuno elula, i-mellow yellows kunye ne-powdery lavenders nazo zinokusetyenziswa. Mthubi ikwangumbala owaziwayo wesitayile selizwe ekhitshini njengoko inika i-cheery kunye ne-vibe ekhululekile kwindawo.
Imhlophe ngee-shades ezahlukileyo zikwadume ngesitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini. Iprojekthi yeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ziziva zikhululekile kwaye zingaqhelekanga, xa kuthelekiswa neekhabhathi zekhitshi ezimnyama. Unokufunda ngakumbi malunga nekhabhathi yelizwe elimhlophe ekhitshini njengoko siqhubeka neli nqaku.
Imibala engachazwanga yesiseko kunye neekhabhathi zentloko nazo zixhaphakile ekhitshini eliphefumlelweyo kwilizwe njengoko longeza umdla ngakumbi kwisithuba. I-Cherry kunye ne-maple, umzekelo zinokudityaniswa kwisiqithi sekhitshi esisembindini nakwiikhabhathi zekhitshi zepherimitha, okanye enye inketho iya kuba mhlophe ngenxa yentloko okanye iikhabhathi zekhitshi ezisisiseko kunye neblue ethambileyo ethulileyo kwisiqithi sasekhitshini.
Amakhitshi elizwe laseFrance aqukethe isimilo sendalo kunye nobuhle bokwenyani bamaphandle aseFrance ngokusetyenziswa kwezinto eziphilayo ezidala imeko-bume entle necocekileyo. Ihlala idityaniswa njenge-ode ukuya kwiindawo ezisemaphandleni, njengoko zonke izinto zayo zirustic kwaye zikhumbuza ngaphandle. Cinga ngemiqadi yophahla, izinto ezenziwe ngentsimbi ezenziwe ngomthi, imifanekiso eqingqiweyo yeplanga, imigangatho ebanzi yeplanga, amatye endalo anje ngeterracotta kunye nezixhobo zobhedu zakudala.
Ngokubanzi, iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance zibonakaliswa kukunzima, ukuntsonkotha kwehlabathi elidala. Phakathi kokukhuthazwa kwesitayile selizwe iikhabhathi zasekhitshini, baneenkcukacha ezihonjiswe kakhulu kunye nombala wombala ofudumeleyo. Iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance nazo zijolise kubugcisa obuhle kunye nokomelela. yomelele eyakhayo.
Iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance ziphume kwipremiyamu yokuhombisa. Ngokwesiqhelo isebenzisa imifanekiso eqingqiweyo yeplanga ebonakaliswe kumnyango wekhabhathi nakubuso bedrowa. Izitayile zeminyango zihlala ziphakamisa iiphaneli, iiphaneli ezihlaziyiweyo okanye ezinikezelwe zizinto zokuhombisa ezijikeleze iphaneli yeziko. Kuyilo oluhombise ngakumbi, imizobo yeendlela ezahlukeneyo zesintu zisetyenziswa njengesigama. Ukongeza kubuso beminyango yekhabhathi ehonjisiweyo, uyilo lweekhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance zikhatshwa zii-corbels, ii-cornices, ukubumba, imilenze kunye nezithuba, zokuziva ucebile kwaye ucocekile.
Ngenye indlela, ukufakwa kweglasi kunye nocingo lwefreyilithi yokufaka iipenitshala zihlala zisetyenziswa kwiminyango yekhabinethi yelizwe laseFrance kuyilo oluvulekileyo nolukhanyayo. Ukongeza koku, iicuisine zelizwe laseFrance nazo zijolise kwifenitshala enje ngefenitshala yekhitshi ukuze ihlale ngakumbi. Iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance zihlala zineenkcukacha ezinokufumaneka kwifenitshala ye-antique enjengemilenze kunye nezithuba zakwiziqithi ezikumbindi okanye iinyawo zokuhombisa iikhabhathi ezisisiseko.
Kwaye ekubeni isitayile selizwe laseFrance sibhiyozela ukonwaba kokuphila kamnandi kunye nokupheka okuyinyani, izixhobo zokupheka ziboniswa njengenxalenye yoyilo lwekhabhathi yekhitshi. Iimbiza, iipani kunye nezinto zokupheka zihlala zixhonyiwe kwiiraki zentsimbi ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi, ukuba aziboniswanga kwiikhabhathi. Iishelufu ezivulekileyo zihlala zibandakanyiwe kuyilo lwekhabinethi yaseFrance yokubonisa izixhobo zasekhitshini kunye nesidlo sangokuhlwa esihle.
Amakhitshi elizwe laseFrance asebenzisa izinto zendalo ezinje ngamatye arhabaxa kunye nokhuni oluqinileyo ukuze enze loo moya uqinisekileyo. Iinkuni zekhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance zihlala zinemibala etyebileyo eseleyo kwimeko yayo yendalo okanye eyonyuswe ngamabala emithi. Eminye imizekelo yeentlobo eziqhelekileyo zomthi ezisetyenziswa kwilizwe laseFrance iikhabhathi zekhitshi yi-oki, imephu, itsheri kunye nepayini.
Iphalethi yombala wekhabhathi zekhitshi yelizwe laseFrance zilawulwa ziitoni zomhlaba, ngakumbi imibala emdaka edla ngokubonakaliswa kukusetyenziswa kwekhabhathi enzima kunye necebileyo yokhuni oluqinileyo kwindalo yendalo okanye enamabala. Eminye imibala engathathi hlangothi efakwe endaweni yeenkuni zendalo imhlophe qhwa kumhlophe nakwi beige. Imibala ehambelana nekhabhathi yekhitshi yelizwe laseFrance nayo ivela kwindalo, ekhumbuza ilizwe laseFrance, ke ezi zihlala zityebile kwaye ziqaqambile. Imilo enomtsalane ye-lavender, iitoni ezipholileyo zomnquma oluhlaza, i-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka okanye i-shades efudumeleyo yegolide etyheli kunye nobomvu obunzulu zihlala zisetyenziswa njengee-aksenti ukongeza ubomi kwilizwe elimnyama laseFrance.
Izixhobo zekhabhathi zekhabhathi zasekhitshini zelizwe laseFrance zikwabonisa ukuziva kwakudala. Ihlala ine-weather egqityiweyo kwaye ihonjiswe ngokuhombisa ngesandla okanye iiplati zangasemva. Ezinye izixhobo zekhabinethi zigqiba iikhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance zimnyama, ubhedu waseVenetian, iantique yakudala, ioyile yokuthambisa ioyile kunye nobhedu lweantiki.
ubungakanani besiqithi sasekhitshini
Ukuhlala unyanisekile kwiingcambu kunye nokukhuthaza, ukubukeka okuhle kunye nokwenyani kweekhabhathi zekhitshi zelizwe laseFrance zihlala zizalisekiswa nezinye izinto zoyilo ezinje ngeemarble okanye itafile yegranite, amalaphu atyebileyo aneephatheni zeentyatyambo, amalaphu anomtsalane kakhulu kunye nokuhombisa okunokupheka Ukuphefumlelwa okufana neziqhamo, isonka okanye iwayini ebhaskithini.
Xa kuthelekiswa neekhitshi zelizwe laseFrance ezihlala zimnyama, zinzima kwaye zijongeka zindala, iiprojekthi zelizwe laseKhaya leFama yasekhaya zithuthuzela ngakwimeko yokubuyela umva kunye nomoya wekhaya. Ngokubanzi, inemvakalelo yokwamkela kakhulu kunye nekhaya elinamandla okanye ikhaya elifana nokusetwa. Ezinye izinto eziqhelekileyo zeKhitshi laseFama laseKhaya ziikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi, imiphezulu yeetafile yamatye ekhanyayo, izixhobo zokubuyisa ezenziwe ngomthi, izixhobo ezenziwe ngomthi, iingqayi zamasoni, amalaphu e-plaid kunye ne-gingham, izixhobo zasefama zakudala, ukuhonjiswa kwezilwanyana zasefama kunye nemisebenzi yobugcisa.
Iifama zelizwe laseKhaya zasefama zijongeka zincinci kwaye zinemvakalelo elula xa kuthelekiswa nobutyebi kunye nobunzima beekhitshi zelizwe laseFrance. Ayisemthethweni kwaye inika iindwendwe ulwamkelo kunye nentuthuzelo.
Olunye lweempawu eziphambili zeKhabhathi yasekhaya yeKhitshi ekhitshini uyilo lwayo olungathobekiyo, oko kuthetha ukuba ithe tye kwaye ihonjiswe kancinci. Ayibeki mali kwi-ornamentation, kodwa ibeka phambili kwintuthuzelo kunye nokuphila okulula. Eminye iminyango eqhelekileyo yekhabethe eboniswe kwiLizwe laseFama laseKhitshini iikhabhathi ziingcango zesitayile sikaShaker, iingcango zepaneli ezicabaleleyo, iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo kunye neengcango zepaneli ezivalekileyo.
Iingcango zesitayile se-Shaker ziimpawu zorhwebo kwiikhabhathi zekhitshi laseKhaya njengoko zihambelana nokulula kunye nokuziva okuqhelekileyo kwikhitshi lendlu yasefama. Iifama zelizwe zasendlini zasefama zasekhitshini nazo zijolise kulwakhiwo lokufunda kunye nokuqinisekisa ukuba izinto zendalo zomthi zilungelelene kakuhle. Iinkcukacha ezityebileyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo yendlu yasezifama kunye noseto lwabefundisi nazo zongezwa njengendawo yokuhombisa kwikhabhinethi.
Njengengxenye yeKhabhathi yasekhitshini lasekhaya laseKhaya, izixhobo zokupheka zikwaboniswa endaweni yokuba zigcinwe ngaphakathi kwiikhabhathi, ke iishelfu ezivulekileyo neziveziweyo zihlala zibandakanywa kuyilo. Enye into ebalulekileyo yoyilo lwekhitshi leNdlu yaseFama yelizwe isinki. I-porcelain yakudala okanye yakudala kunye neefinki zentsimbi ezingenazintsimbi ezibonisa ubume obunzulu, obubanzi obufakiwe kwiikhabhathi ezisisiseko. Ezi sinki zihlala zisebenza njengeyona ndawo iphambili ekugxilwe kuyo kwiikhabhathi zasekhitshini laseKhaya. Olunye uhlengahlengiso oluphawulekileyo lokuzalisa ziibhloko zeebhusha okanye iiplathi zokubala ezongeza ukonwaba kwendalo.
Ikhitshi lendlu yasefama likwasebenzisa kakhulu izinto zendalo ezinje ngomthi onzima kunye nelitye. Iifama zelizwe zasendlini zasekhitshini zihlala zakhiwe ngomgangatho ophezulu wokhuni oluqinileyo njenge-cherry, i-oki, imephu, i-redwood, i-fir kunye nepine. I-Pine zezona ntlobo zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zomthi kwiifama zelizwe iikhabhathi zasekhitshini ngenxa yegolide etyheli ngombala kunye nokubonakala kwendalo, okwenza umdlalo ofanelekileyo wokuziva okwenene kweekhitshi zasendlini.
Inkuni efunyenweyo ikwayenye into edumileyo eboniswa kwiKhitshi leFama yeLizwe. Izinto ezisindisiweyo zizisa ixesha lokunxiba, elenza ukuba amakhitshi endlu yasezifama azive ahlala ngakumbi. Iinkuni ezindala zinyuselwa iibhayisekile zize zisetyenziswe njengama-accents, iikhawuntari zomsebenzi, imiqadi yophahla, i-flooring, i-shelving, i-hood cover okanye kwezinye iimeko, njengeengcango zekhabinethi . Ukungafezeki kwendalo, ukuqhekeka okanye amabala eenkuni ezihlanguliweyo kukwaxabiseka kwiikhitshi leLizwe laseFama njengoko zinika iikhabhathi ukubonakala okunezothe.
Iphalethi yombala ngokubanzi weKhitshi laseKhaya laseKhaya likhanya ngokulula kunelizwe laseFrance, yiyo loo nto ubumnandi bubukeka ngakumbi kwaye kulula emehlweni. Iifama zelizwe zasendlini zasefama zasekhitshini zihlala zishiywa zingagqitywanga ngemibala yazo eyahlukileyo yendalo okanye zonyuswe ngamabala emithi. Ngelixa kwezinye iimeko, bayaphathwa ngokugqitywa okupeyintiweyo kusetyenziswa ukungathathi cala njengombala oqaqambileyo omhlophe, i-beige e-creamy okanye imibala etshisiweyo njenge-grays epholileyo, i-taupe okanye i-mocha ekhanyayo. Ukuze uzive uphila ngakumbi, iikhabhathi zasekhitshini zelizwe laseKhaya nazo zinokupeyintwa ngee-pastels eziqaqambileyo, ezinomtsalane ezinje ngemifuno epholileyo, i-blowu eqabulayo eqaqambileyo, umthunzi otyibilikisiweyo we-lavenders emthubi okanye enelanga.
Indibaniselwano yeklasikhi yeefama zelizwe leefama zasekhitshini zipeyintwe ngeendonga ezimhlophe ezimhlophe njengoko zimi ngakumbi xa zibekwe kwimvelaphi yokukhanya.
Ikhabhathi emhlophe yenye indlela egqibeleleyo yokufaka umbala kwiikhabhathi zekhitshi zelizwe. Ukuba uyabuthanda ubukhazikhazi bendalo beekhikhini zelizwe kodwa ufuna ukuphambuka kuluvo olunzima lokuba iiprojekthi zemveli ezityebileyo zemithi, iikhabhathi zelizwe elimhlophe lelona khonkco unokukhetha. Xa kuthelekiswa nobumnyama, isityebi iikhabhathi zekhitshi zelizwe, iikhabhathi ezimhlophe zineetoni ezininzi kwaye zibuyiselwe umva.
Iikhabhathi zekhitshi zelizwe elinamaplanga ngamanye amaxesha zinokuba nzima kakhulu emehlweni, kwaye zinokwenza indawo encinci ive ngathi icinezelekile, kodwa iikhabhathi ezimhlophe zisebenza ngenye indlela ejikeleze.Babuyisa ukukhanya kwendalo ngcono, ngaloo ndlela benza ukukhanya okukhanyayo, okuhlaziyayo kunye nokuva komoya kwizithuba. Inokudala ukukhohlisa kwendawo enkulu ethetha ukuba isebenza kakuhle kwiikhitshi zelizwe elincinci.
I-crisp, ikhabethe elimhlophe lekhabhathi ikwayindlela elungileyo yokwenza iikhikhini zelizwe zingabonakali kakuhle ngokwesiko. Ingenza ngokubonakalayo ikhitshi lakho liziva litshintsho ngakumbi, kwaye ibonelele ngokwahluka xa kuziwa ekuxubeni nasekufaniseni izinto zokuhombisa, izixhobo kunye nempahla. Ngekhabhathi yelizwe elimhlophe ekhitshini, ungaphonononga uninzi lwezinto onokuzikhetha kwiitafile, izinto zokubuyela umva, ukutyibilika, imibala yodonga kunye nekhabhathi yentsimbi. Indawo yangasemva engathathi hlangothi ikwenza ubume bhetyebhetye bokwazisa ukutshiza kombala kuyo yonke iphalethi yakho.
Olunye uncedo oluphambili lweekhabhathi zelizwe elimhlophe likhitshi kukuba alusoze luphume ngesitayile. Ngokubanzi, umhlophe ngumbala ongapheliyo kwaye uzibonakalisa ukuba lukhetho oluqhelekileyo olunokuma kuvavanyo lwexesha.
Endaweni yokusebenzisa umthunzi oqaqambileyo omhlophe wekhabhathi zelizwe, khetha iithowuni zecramier ezinje nge-beige njengabamhlophe abaqaqambileyo bathambekele ekulungeleni imeko yangoku ngcono. Kwihlabathi elidala ukuziva, uxinzelelo okanye ukugqitywa kwe-antique kusetyenziselwa ukwenza ukuba iikhabhathi zelizwe elimhlophe zibonakale zinexesha elininzi kunye nexesha elifanelekileyo. Ngelixa ukulungela useto oluqhelekileyo njengakwikhitshi leFama yeLizwe, ukugqitywa okucacileyo ngesixhobo se-antique kufanelekile.
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo yokuba umhlophe ngamanye amaxesha uyadika, buthuntu okanye ucace kakhulu, iikhabhathi zelizwe elimhlophe zibonelela inzala kunye nenani elifanelekileyo lokulinganisela kubunzima beeseto zasekhitshini. Ubuhle babo buhlala buphuculwa ngokuhonjiswa ngokugqwesileyo kunye neenkcukacha eziyilwe kakuhle, ngaloo ndlela zibonelela ngakumbi ngokubonakalayo kwinkangeleko yelizwe ephefumlelweyo yokuseta iikhitshi. Ukusetyenziswa koburhabaxa kunye nokuxhasa izinto zendalo kunokunceda ekuphuculeni ubuchule be-rustic obufunekayo kuseto lwekhitshi yelizwe.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zikwanika ilizwe elinamandla, ngakumbi xa zidityaniswe nohlobo olufanelekileyo lokusila kunye neenkcukacha ezinje ngesithsaba sokubumba, ukufakwa kweglasi kunye nezinto zokuhombisa. Ukuvelisa ukuseta okuphefumlelweyo okungaphezulu, isibini esimhlophe esimhlophe iikhabhathi zelikhitshi elinokukhanya okubala kwamatye endalo, njengelitye lekalika. Kwelinye icala, amakhitshi asefama asekhaya ahlala enekhabhathi emhlophe yeklasikhi kunye nebhloko yokusika okanye i-countertop yeplanga. Imhlophe kunye nomdaka zithathwa njengezintandokazi kwindlu yoyilo yekhitshi ngenxa yefuthe lendalo elinikezela kwisithuba.
Uyilo lweKhitshi yelizwe - Iikhikhini zelizwe elimhlophe - Ingcibi yekhitshi - Uyilo lweKhitshi yaseRustic
ngowuphi umnwe ofaka isithembiso kuwo
Iingubo zokuvuselela iilokhwe kunye nobukhulu
Umsesane wesithembiso ngegolide yakhe
yintoni isikhumbuzo seminyaka engama-50 sitshatile?